Xaliimo Yareey oo xarunta Gollaha Shacabka soo gaartay | Keydmedia
Xaliimo Yareey oo xarunta Gollaha Shacabka soo gaartay
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliimo Yarey iyo xubno ka tirsan guddiga ayaa hadda soo gaaray xarunta Villa Hargeysa ee fadhiga Gollaha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey ayaa daqiiqado ka hor soo gaartay xarunta Villa Hargeysa ee fadhiga Gollaha Shacabka.
Guddoomiyaha ayaa la sheegayaa in ay hor u dhac u tahay xubnaha uu hoggaaminayo madaxweyn Farmaajo oo la filayo in uu goordhow soo gaaro fadhiga Gollaha Shacabka, waxaana sidoo kale Xaliimo Yarey la socdo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Qaranka.
Sidoo kale xarunta Villa Hargeysa ayaa la sheegayaa in ay soo wada xaadireen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxaana lagu soo waramayaa in xilli hore uu kooramka buuxsamay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta baarlamaanka hor tagayo, isagoona khudbad xasaasi ah ka jeedin doono, taas oo ku saabsan arrimaha siyaasadda dalka, gaar ahaan dooraahada 2020/21 oo laga walaacsanyahay.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynaha laga yaabo in uu baarlamaanka ka codsado muddo kordhin in loogu sameeyo xilliga magacaabista Ra'iisul Wasaaraha cusub ee bedelaya Xasan Cali Kheyre oo la riday 25 Bishii Julay.
Si kastaba lama saadaalin karo, waxa diiradda lagu saari doono khudbadda madaxweynaha, haseyeeshee wixii ku soo kordho kala soco Keydmedia Online oo arintaan isha ku heyso.